Nepse(Nepse) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
४५ नम्बर ब्रोकरले मलाई हैरान बनायो, सेबोन अध्यक्ष ज्यू न्याय चाहियो !
-अनन्त्य सुन्दर नेपालमा अहिले ५० वटा ब्रोकरहरू सञ्चालनमा छन्। दैनिक रूपमा बजारमा कारोबार बढ्दै गएको छ। ब्रोकरले फोन नउठाउने, समयमा सेयर र पैसा नहाल्दिने जस्ता व्यवहारले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन्। साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई ब्रोकरहरूले गर्ने व्यवहारले, ‘के ब्रोकर ठूला लगानीकर्ताका लागि मात्र हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो...
काठमाण्डौ । कुल बजार पूँजीकरणले आज सर्वाधिक रेकर्ड कायम गरेको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेप्से परिसूचकले आज सर्वाधिक उचाई कायम गरेको दिन बजार पूँजीकरणसमेत २८ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ । सेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बिहीबार बजार पूँजीकरण हिजोको तुलनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आजै...
भोलिबाट हिमालय डिस्टीलरी र मल्टीपर्पोज फाइनान्सको सेयर किनबेच गर्न मिल्ने
काठमाण्डौ । हिमालय डिस्टीलरी लिमिटेड र मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका आज आइतबार रोक्का भएको सेयर कारोबार पुनः फुकुवा भएकाले भोलिदेखिबाट भने कारोबारमा आउने भएको छ । नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक नवीकराण शुल्क आज बुझाइसकेपछि हिमालय डिस्टीलरी लिमिटेड र मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका सेयर भोलि सोमबारबाट धितोपत्रको...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा कम्पनीहरुले सूचीकरण विनयमावली बमोजिम वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का भएको छ । नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदका अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा कम्पनीहरुले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन ढिला गरेका कारण...
काठमाण्डौ । बुधबार सेयर कारोबारमा नयाँ इतिहास बनेको छ । यो दिन नेप्सेमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबारको रेकर्ड बनेको हो । यो दिन ४५ हजार २७२ पटक सेयर कारोबार भई गत सोमबार कायम रेकर्ड ४० हजार २०६ पटक सेयरलाई तोडिएको नेप्सेले जनाएको छ । पछिल्ला समयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत् सेयर कारोबार गरिरहेकाले यो रेकर्ड कायम भएको...
सेयर कारोबारमा गुुनासो छ , नेप्सेको हेल्प डेस्कमा फोन गर्नुुस्
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले गुनासो समाधानका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । नेप्सेले आज जारी गरेको एक सूचनामा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा आउन सक्ने सम्भावित समाधानका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरेको जनाएको हो । धितोपत्र कारोबारका क्रममा कुनै किसिमका समस्या वा गुनासो भएको खण्डमा टोल फ्रि नम्बर �...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स प्रकरण : सूचना लुकाउन नेप्से प्रमुख साउदकै चलखेल, राजीनामा माग
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको बजारमूूल्य संवेदनशीलसम्बन्धी सूूचना लुुकाउनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओ चन्द्रसिंह साउदको भूूमिका रहेको रहस्य खुलासा भएको छ। सीईओ साउदकै ठाडो हस्तक्षेपमा नै लाभांशसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना आमलगानीकर्ताको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने र बाहिर नल्याउने नियतले कपटपूर्ण काम भएको रहस्य...
काठमाण्डौ । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निश्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने गरी धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०७३ हालै संसोधन गरी फागुन १(आज)देखि कार्यान्वनमा ल्याएको छ । विगत लामो समयअघिदेखि नै सार्वजनिक निश्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि चर्चामा आइरहेको थियो । यस्तो विधि कार्यान्वयनमा...
शिवम्को यात्रामा ओरालो लाग्दै गर्दा एनआइसी उक्लिँदै,लगानीकर्ताहरु विवेकी बन्दै
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा यस साताको कारोबारको पहिलो दिन नेप्से इण्डेक्समा झिनो अंकले गिरावट आउँदा कारोबार रकममा भने बढोत्तरी भयो । सूचीकृत कम्पनीहरुका त्रैमासिक वित्तीय विवरण आउने क्रमसँगै नाफा बढी कमाउने कम्पनीहरुमा उचित लाभांश पाउने आकांक्षामा लगानीकर्ताहरु झुम्मिरहेका देखिन्थे । हुन पनि विवेकी...
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा शुक्रबार एकैदिन ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका शेयर सूचीकृत भएको छन् । विभिन्न कम्पनीले वितरण गरेका बोनस र हकप्रदवापत् कूल ६ करोड ३० लाख ५२ हजार १ सय ३१ कित्ता शेयर सूचीकृत गरेको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । साना किसान माइक्रोफाइनान्सले जारी गरेको २४.२२ प्रतिशत हकप्रदवापत् ८५ हजार कित्ता शेयर...
अन्तिम समयमा बढ्यो नेप्से
शेयर खरीद तथा विक्रीमा सेमी अनलाइन सेवाको शूरुवात भएसँगै आइतबार बजार सूचक नेप्से २ दशमलव ६ अंकले बढेको छ । काराबोर शूरु भएको केही समयमा नै करीव १६ अंकले कमी आएर १ हजार २ सय ६० अंकमा पुगको बजारले अन्तिम समयमा सकारात्मक लय पक्रेको हो । वर्षको पहिलो कारोबार दिन १ सय ६५ कम्पनीेका शेयर खरीद विक्री भए । होटल , विकास बैंक, बीमा, अन्य र लघुवित्त सूचक...
बिमामा लगानीकर्ताको यूटर्न, १५.३१ अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाण्डौ । बजेट वक्तव्यपछि केही दिनसम्म ओरालो यात्रामा रहेको बिमा समूहको बजार परिसूचकले बुधबार ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । यो समूहको सूचक एकैदिन ३८७.२ अंकले बढेपछि समग्र बजार पनि उकासिएको हो । बजेट वक्तव्यपछि बजारमा फैलाइएको हल्लाका कारण पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका लगानीकर्ता यूटर्न हुँदा बिमाको कारोबार एकाएक चम्किएको हो । बिमा...
बजारको चमक फर्काउँदै बिमा र बैंक, बंगलादेश बैंकमा झुम्मिए लगानीकर्ता
काठमाण्डौ । सुनियोजित रुपमा चलाइएको बजार हल्लाका कारण करिब एकसातासम्म हराएको पूँजीबजारको चमक बैंक र बिमा समूहले फर्काउन सुरु गरेका छन् । सोमबारबाट यी दुई समूहको सूचकमा सुधार भएसँगै अधोगतितर्फ लागेको समग्र नेप्से परिसूचकमा समेत सुधार हुने क्रम जारी रहेको छ । सोमबार ३३ अंकले बढेको बजार मंगलबार पनि १४.६९ अंकले उकालो लागी नेप्से...
बजार यूटर्न हुँदा ३३.६६ अंकले बढ्यो नेप्से, बैकिङ समूहको मात्र ६२ करोडको कारोबार
काठमाण्डौ । बजेट वक्तव्यपछि निरन्तर ओरालो लागी आइतबार अत्यासलाग्दो अंकले झरेको पूँजीबजारमा सोमबार यूटर्न भई करिब सोही अंकले उक्लिएको छ । आइतबार एकैदिन करिब ३५ अंकले ओर्लिएको बजारमा सोमबार ३३.६६ अंकले यूटर्न हुँदा नेप्से परिसूचक बढेर १५६१.८० अंकमा पुगेको छ । बजेटपछि आइतबारसम्म सधैं घट्दै आएको बिमाको परिसूचक १७५.३५ अंकले बढेको छ...
काठमाण्डौ । सरकारको बजेट प्रस्तुतीपछि करेक्सनको मोडमा रहेको पूँजीबजारमा साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार गतिलै ब्याक गियर लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) परिसूचक एकैदिन ३६.३४ अंकले घटेर १४८१.२९ अंकमा आइपुगेको छ । आइतबार होटल र उत्पादनमूलक समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा रातो पोतियो । होटल समूह १३६.८२ अंकले उक्लियो भने...